HomeWararka Ciyaaraha MaantaManchester United oo guul daro kala kulantay kooxda Xaalka ku xunyahay ee Liverpool
May 14, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Falanqeynta Kulamada, Horyaalka Ingiriiska 0
kooxda Manchester United oo garoonkeeda ku soo dhaweesay Liverpool ayaa guul daro kala kulantay kulan ka tirsan Horyaalka Premier League oo ku soo dhamaaday 2-4.
kulankan ayaa qeybta hore lagu kala nastay 1-2 gool oo Liverpool hogaanka ku heysay waxana qeybta hore hogaanka qabatay Manchester united gool uu ka caawiyay Bruno Fernandes daqiiqadii 10aad ee ciyaarta isagoo kubad qurux badan ku hubsaday shabaqa taasi oo ku sii dhacday mid kamid ah daafacyada kooxda.
Liverpool ayaana goolkaasi kaga jawaabtay labo gool iyadoo goolka hore uu kubad cirib ah uu ku dhameestiray Diogo Jota daqiiqadii 34aad ee ciyaarta waxana gool madax ah hogaanka ugu dhiibay liverpool Roberto Firmino kaasii oo dhameestiray kubad uu soo qaaday Trent Alexander-Arnold daqiiqadii 45+3aad guud ahaan qeybta hore ayaa lagu kala nastay 1-2.
Qeybta danbe ayay Liverpool markale hogaanka sii dheereesatay kadib markii uu mar kale shabaqa soo taabtay Roberto Firmino kaasi oo dhameestiray kubad uu iska soo bixiyay goolhayaha, Reds ayaana heshay goolkeeda labaad Marcus Rashford ayaana kubad dhinac ka dhigay goolhayaha daqiiqadii 68aad isago markii hore ku soo dhufsaday Cavani oo horay u sii dhigay kubada.
United ayaa u muuqatay kulankan kuwa sameeyay qaladaad badan iyadoo kubadaha badankooda laga soo qaatay xidigaha kooxda Manchester united ugu danbeyn Mohamed Salah ayaa soo qatimay goolasha kulankan isagoo kubad qurux badan shabaqa ku hubsaday daqiiqadii 90aad kubadaasi uu kasoo jiitay dhexda guud ahaan ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 2-4.
Natiijada ayaa ka dhigan in Liverpool ay soo gasho booska 5aad iyadoo leh 60 dhibcood halka Man United ay ku jirto wali booska labaad iyadoo leh 70 dhibcood.